शोभा ज्ञवाली - Shova Gyawali | Nagarik News - Nepal Republic Media
aakriti72@gmail.com or shova.gyawali@nagariknews.com
शोभा ज्ञवालीका लेखहरु :
नेपाली मिडियाका आरोह/अवरोह
उसै त आर्थिकरूपमा सन्तोषप्रद् नभएको यो क्षेत्र भूकम्प र कोभिड महामारीपछि निकै दयनीय बन्न पुगेकामा दुई मत छैन। त्यसपछि कतिपय सञ्चारगृहलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत धौ धौ पर्‍यो।
शोभा ज्ञवाली ११ वैशाख २०७९ आइतबार ७ मिनेट पाठ
नयाँ वर्ष तिमीलाई धेरै आशासहित स्वागत छ धेरै कार्य शुभ होस् भनी तिमीलाई स्वागत छ।
शोभा ज्ञवाली १ वैशाख २०७९ बिहीबार १ मिनेट पाठ
मुलुकमा व्यापकरूपमा मौलाएको दण्डहीनताको अवस्थालाई जरैदेखि उखेल्न सक्दा नारीको अधिकार उपयोगमा देखिएका तगारा पन्छिन सक्छन्।
शोभा ज्ञवाली २४ फाल्गुन २०७८ मंगलबार ६ मिनेट पाठ
मैले मन पराएको ऊ। उसले मन पराएको म। मन पराएकोबाटै यस्तो दुर्व्यवहार हुन थालेपछि भनौँ कसलाई? के मलम लगाउँ पीडामा? कहाँ गएर पोखौँ वेदना? उत्तर थिएनन्। थिए त केवल प्रश्नका चाङ मात्र।
शोभा ज्ञवाली २२ माघ २०७८ शनिबार ८ मिनेट पाठ
यो जीवन मोतीको मालाजस्तै रहेछ। मिलाएर लाउँदा झलझल परेको राम्रो तर माला चुँडियो भने सबै टुक्राटुक्रा। दाजुको परिवार पनि सम्हाल्न नजान्दा केही समय अघिसम्म छरिएको मोतीजस्तै थियो, अहिले यो परिवार गाँसिएको मालाजस्तो भएको छ।
शोभा ज्ञवाली २७ कार्तिक २०७८ शनिबार ९ मिनेट पाठ
समग्रमा तिहार दाजुभाइ र दिदीबहिनीको खुसी बाँडचुँड गर्ने तथा समृद्धिको कामना गर्ने एउटा महान् पर्व हो। जतिबेला सँगै बसेर मीठा खानेकुरा खाने, पूजाआजा गर्ने मात्र हैन, जुवातास खेलेर समेत मनोरञ्जन लिने गरिन्छ।
शोभा ज्ञवाली १३ कार्तिक २०७८ शनिबार ६ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली १६ आश्विन २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
उफ्, यो माया भन्ने जिनिसमा पनि कति समस्या आउने। किन होला ? आफूले मन पराएकोसँग खुरुक्क विवाह नहुने। उता आभासलाई आनन्द छ। यता मलाई किन यति गाह्रो ? छोरी मान्छेको समयमै विवाह भएन भने गाह्रो हुन्छ रे। त्यसैले होला, बाबाआमाले मेरो विवाहका लागि धेरै नै जोड दिनुभएको। मनभित्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो। एक मनले त आभाससँगको सम्बन्धबारे आमाबाबालाई भन्दिउँजस्तो लागिरहेको थियो, म ऊबिना आफ्नो भविष्यको कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ भनेर ।
शोभा ज्ञवाली १९ असार २०७८ शनिबार ९ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली २९ जेष्ठ २०७८ शनिबार १२ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली २२ जेष्ठ २०७८ शनिबार १० मिनेट पाठ
ओहो, आज के भएको यस्तो, हावाहुरी अनि पानी बाटोभरि, अस्तव्यस्त ! वैशाख सकिन आँटिसक्यो, चैतमा लाग्ने हावाहुरी अझै बेस्सरी चलिरहेकै छ। पानी पर्न रोकिएको थिएन। बाहिर हावाहुरीले ताण्डव मच्चाइरहेको थियो। म अफिसबाट भर्खरै फर्किएकी थिएँ। त्यो पनि छिटोछिटो काम सिध्याएर आएको। आकाश पहिले नै आएको रहेछ, ऊ कोठामा बसेर टिभी हेरिरहेको देखेँ। अचम्म परेँ।
शोभा ज्ञवाली २५ वैशाख २०७८ शनिबार ९ मिनेट पाठ
नयाँ वर्ष तिमीलाई हर्ष उल्लासका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष तिमीलाई उत्साह अनि जाँगरका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष तिमीलाई एउटा स्वर्ण बिहानीको साथ स्वागत गर्न चाहन्छु।
शोभा ज्ञवाली १ वैशाख २०७८ बुधबार १ मिनेट पाठ
यो स्वर पहिले कतै सुनेजस्तो लाग्यो। म हतारहतार बाहिर आएँ। देखेँ, मेरो पहिलो प्रेम राकेश, जो डाक्टर भइसकेछ। उसले गीत सकेपछि सबैले ताली बजाए। उसले कैयौँपटक मेरो दादाको कोठामा बसेर गितार बजाउँदै गाएको थियो, मैले आफ्नो कोठाबाट ताली लगाएकी थिएँ।
शोभा ज्ञवाली २८ चैत्र २०७७ शनिबार ९ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवालीका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्